Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- समाचार
काठमाडौं, १० जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
काठमाडौँ, १० जेठ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रा.डा. रामस्वार्थ रायलाई डेनमार्कको राजदूतका लागि सर्वसम्मत् अनुमोदन गरेको छ ।
वीरगन्ज, १० जेठ । मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगर वीरगन्ज महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर राजेशमान सिंहले आफूले शपथ ग्रहण गरेको २४ घण्टाभित्र वीरगन्जवासीले परिवर्तनको आभाष गर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौँ, १० जेठ । मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्तले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको चर्को मूल्यवृद्धिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सर्लाही, १० जेठ । सर्लाहीको लालबन्दीमा लागूऔषध गाँजासहित ६ जना पक्राउ परेका छन् ।
जनकपुरधाम, १० जेठ । धनुषाका नवनिर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् ।
डा. राउतको प्रश्न– ‘हजार रुपैयाँमा मत बेचिराखेका छन्, त्यो जनतालाई कसरी सचेत भन्ने ?’
जनकपुरधाम, १० जेठ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले स्थानीय तहको निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएको आरोप लगाएका छन् ।
वृन्दावन नगरपालिकामा नेकपा एस विजयी
रौतहट ९ जेठ । रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा एकिकृत समाजवादीले विजय हासिल गरेको छ ।
सर्लाही ः बरहथवा नगरपालिकामा एमाले विजयी
सर्लाही, ९ जेठ । सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा एमालेका कल्पना कुमारी कटुवाल विजयी भएकी छन् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरमा मनोज साह विजयी
जनकपुरधाम, ९ जेठ । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज साह विजयी भएका छन् ।
मधेशका कान्छा जनप्रतिनिधि
काठमाडौं, ६ जेठ । यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा कान्छा जनप्रतिनिधि निर्वचित भएका छन् । सिभिल इन्जियरिङ्गसम्मको शिक्षा प्राप्त २१ वर्षका रणवीर मण्डल धनुषा जिल्लाको कमला नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष बन्न सफल छन् ।
मधेशमा कमजोर भयो जसपा र लोसपा : सीकेको उदय, कांग्रेसलाई ‘सुखद’
काठमाडौं, ६ जेठ । स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम अनुसार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएका छन् ।
टीकापुर नगरपालिकामा रेशमलाल चौधरीको पार्टीका मेयर विजयी
कैलाली, ५ जेठ । टीकापुर घटनाको अभियोगमा जेल जीवन बिताइरहेका सांसद रेशमलाल चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर नगरपालिकामा शानदार जीत हासिल गरेको छ ।
मधेशकी प्रथम महिला मेयर रीना साह पुनः निर्वाचित, गठबन्धन दोब्बर मतले पराजित
गौर, ५ जेठ । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको मेयर पदमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार रीना कुमारी साह निर्वाचित भएकी छन् । उनले गठबन्धनको उम्मेदवार रामप्रवेश यादवलाई झण्डै दोब्बर मतले पराजित गरेकी हुन् ।
बलान–बिहुल गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा जनमतको जीत
सप्तरी, ४ जेठ । डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सप्तरी जिल्लाको बलान–बिहुल गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा जीत हासिल गरेको छ ।
जनकपुरधाममा मनोज साहको अग्रता कायमै, लोसपा तेस्रो स्थानमा उक्लियो
काठमाडौं, ५ जेठ । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज साहले अग्रता कायमै राखेका छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका मनोज चौधरी तेस्रो नम्बरमा उक्लेका छन् ।
जलेश्वर–४ मा एमालेका हरिचन्द्र महतो ३४० मतान्तरले विजयी
महोत्तरी, ४ जेठ । जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिका वडा नं. ४ (सुगा भवानीपट्टी) मा नेकपा (एमाले)मा हरिचन्द्र महतो ३४० मतान्तरसहित विजयी भएका छन् ।
महोत्तरी गाउँपालिका अध्यक्षमा तमलोपा विजयी
महोत्तरी, ४ जेठ । वृषेश चन्द्र लाल नेतृत्वको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि पालिका अध्यक्षमा आफ्नो खाता खोलेको छ । चुनावको मुखमा तमलोपा पुनर्जीवित गरेका लालको पार्टीले यो पहिलो पालिका प्रमुखमा सफलता हात पारेको हो ।
पालिका प्रमुखमा जनमतको पहिलो जीत
सप्तरी, ४ जेठ । डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पालिका प्रमुखमा खाता खोलेको छ । सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको मेयरमा जनमतले जीत हासिल गरेको हो ।
सर्लाहीको हरिपूर्वामा कांग्रेस विजयी
सर्लाही, ४ जेठ । सर्लाही जिल्लाको हरिपुर्वा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
नेपालगन्ज, ४ जेठ । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ ।
महोत्तरीको रामगोपालपुरमा एमाले विजयी
महोत्तरी, ४ जेठ । रामगोपालपुर नगरपालिकामा नेकपा (एमाले) का उम्मेद्वार प्रमुख–उपप्रमुखमा विजयी भएका छन् । प्रमुखमा रामदुलार साह र उपप्रमुखमा रिनादेवी यादव विजयी भएका हुन् ।
विराटनगर महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वारको अग्रता कायमै
विराटनगर, ४ जेठ । विराटनगर महानगरपालिका मेयरमा पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइरालाले अग्रता कायमै राखेको छ ।